Ukuncelisa Umntwana kunye nokukhulelwa | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Ukuncelisa Umntwana kunye nokukhulelwa
Uvakalelo lwenqabiseko ngenkqubela
Amaphepha amaninzi malunga nosana nokukhulelwa
Ngaba ndifanele ndilincelise umntwana? Umbuzo abaninzi oomama balindele. Kweminye into ecacileyo, kodwa kungekhona kwabanye. Abaninzi bayazibuza ukuba kwaye bangayenza njani "okulungileyo" okanye ukuba bajonge ntoni xa bebele.
Ukuncelisa - umba wokuziva
Ngokuyinene umntwana wokuqala uhlala engaphephekanga, kodwa oomama abaninzi abanamava amaninzi amava amaninzi ngokuphindaphindiweyo xa umntwana wesibini okanye wesithathu ngokuzenzekelayo esayine iimfuno ezahlukeneyo kunye nokuphendula malunga nokuncelisa, njengabantwana bakhe abadala.
Ngaba ndifanele ndilincelise umntwana? Ulwazi kunye neengcebiso
Ukunxiliswa njengokunxibelelana ngokungabonakali phakathi komama nomntwana
Nangona kunjalo, amava oomama kunye nababelethisi abonisa ukuba uxinzelelo okanye ukucwangcisa ukunyanga kubangela ingqiqo. Ngenxa yokuba kwelinye icala kukho ulwazi, kodwa ngakwelinye icala umntwana.
Kwaye kuthethwa nje kwimeko. Ukukhetha kwakhe, iimfuno, iimvakalelo zendlala, kodwa kwakhona umnqweno wokusondelana kunye nokukhuseleko kuya kugqiba ikhosi kunye nesingqimba sokuncelisa ibele ngexesha. Emva koko, ummi omncinci womhlaba ngumntu oyintloko ngokunyamezela.
Ukuba uMama uthemba umntanakhe, uyazibandakanya nayo, kwaye unamandla, oko yindlela eyona ndlela ibhetele yokunqoba ubunzima bokuqala. Oku kusebenza kumbuzo wokuba umntu abele ilanga elingakanani. Kwakhona, akukho mgaqo, akukho mgaqo. Nangona uthanda umama nomntwana, oko kulungile.
Ukuba imfuneko yecala elinye liphela, ixesha elininzi kwelinye icala libuye lenze intuitively neempembelelo ukuba lixesha lokuyeka. Ukunxibelelana phakathi koomama nomntwana kufumaneke kuphela nge-intuition kunye neemvakalelo, ezingafaniyo xa uncelisa.
Ukuba ukuncelisa ikwaxutyushwa kwinqanaba lezondlo, lihlala liza kugxininisa ukuba akukho nxaxheba efanelwe yobisi lwebele. Umxube obandakanyekayo owenziwe kwizorhwebo kusekelwe kwinkomo, inyosi okanye ubisi lwe-mare kwaye ulingise ubisi kunokwenzeka. Kodwa abanalo olo hlobo.
Kungenxa yokuba ezi zinto kuphela ziqulethe izinto ezikhuselekileyo zokuzivikela ezifunwa ngumntu omncinci, ngokukodwa kwisiqingatha sonyaka sokukhusela isidleke sakhe. Ezi zininzi ziqulethwe kwi-colostrum, i-foremilk ebizwa ngokuba yi-foremilk, enikezelwa kwiintsuku zokuqala emva kokuzalwa. Emva koko kufikelelwe ekubunzeni ubisi lwangempela lobisi.
Nantsi ukubunjwa kwakhona into eyahlukileyo. Endleleni ukusuka ekugqibeleni kubisi lonina, umxholo weprotheni wehla, umgangatho we-fat and carbohydrate uyanda. Ubungakanani obuvelisiweyo buxhomekeke kumlinganiselo wokunikezelwa kwemfuno, kodwa imfuno iyahluka ngokufanayo. Nazi izibalo ezibalulekileyo ezithelekisa ubisi lwebele nobisi lweenkomo:
Itheyibhile ibonisa ukuba ubisi lobuntu nje lulungelelaniswe neemfuno zentsana. Ubisi lweenkomo luqukethe iiprotheyini ezininzi okanye iiprolekhi zeprotheni zintsana, ezingonakalisa iintso. Ngoko ke, ubisi lweenkomo alufanele lunikezwe kunyaka wokuqala wobomi. I-carbohydrate kunye nomxholo weoli, ngakwelinye icala, iphantsi.
Nangona kunjalo, ngaphezu kombuzo wesondlo, ukuncelisa kuzalisekisa omnye umsebenzi obalulekileyo: ukuxhomekeka kwengqondo phakathi komama nomntwana. Ngokukodwa ekuqaleni, xa uqala 'ukuzanazana', ukuba umntwana ufumane indlela yakhe ngaphandle kokukhusela kwisisu esiswini sakhe esitsha kwaye ufuna ukukhuseleko oluninzi. Ngaloo ndlela ukunyamezela kunceda ukukhuthaza le miba.
Ukuncwina kunika ukhuseleko lomntwana
Ubundlelwane obusondeleyo, obunothando phakathi koomama nomntwana, oveliswa ngexesha lokuncelisa, kunzima ukutshintsha nayiphi na into. Kubalulekile apha yindawo enokuthula, ukufudumala nokuthuthuzela.
Akukho TTV okanye i-omsakazo kufuneka iqhutywe ngendlela, ifowuni kufuneka icimeke kwaye umsebenzi wendlu kufuneka unikezelwe kwiiveki zokuqala ukuba kunokwenzeka. Kule ndawo, bobabini banokuzonwabisa ngokusondelana kunye nokwakha ubuhlobo obusondeleyo nomnye.
Enyanisweni, ukuncelisa unayo kunemilinganiselo ebonakalayo. Kuhlala njalo kunye nendawo yonke ukutya okulungileyo, ngokubunjwa ngokufanelekileyo kunye nobushushu, ngokulungele ukulungiswa kunye nentsholongwane. Akukho zithuthi zebhotile, ukufudumala kwebhotile kunye nezinye izinto zokusebenza eziyimfuneko. Oku kunika umama ngakumbi ukuguquguquka kunye nomzamo ongaphantsi kombutho.
Konke kuzo zonke, kuye kwakha ubulumko bendalo ukuze ukunyamezela kuyisiqalo esilungileyo ebomini kumntwana omtsha omntwana. Izondlo, iimvakalelo kunye nemeko. Kakade ke, kukho abesifazana abangenako okanye abangafuni ukumncelisa. Okukugqibela kulungile, kuba akufanele kubekho ukunyanzeliswa kwiimvakalelo zakho. Oko kwakungayi kuba kuhle kumacala omabini. Nangona kunjalo, ukuba kukho umnqweno kunye nokwenzeka ukuba uncelise, oku kufuneka kukhethwe nasiphi isisombululo sokwenza okuthile.
Ikhasi lemibala yokukhulelwa umntwana izinto
Ukubala imibala yabantwana kunye nosana